မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြုပ်နှံမှုအတွက် အမေရိကန် အမတ်တွေက သတိပေး
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ရီပတ်ပလစ်ကန်ပါတီ အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ ဂျွန်မက်ကိန်း (John McCain) နဲ့ တသီးပုဂ္ဂလ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျိုး လီဘာမန်း (Joe Lieberman) တို့က အမေရိကန် အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူမှုတချို့ လျှော့ပေးတာကို ကြိုဆိုလိုက်ပေမယ့် အစိုးရပိုင် မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနဲ့ အကျိုးတူ လုပ်ငန်းလုပ်မယ့် ကိစ္စဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အဟန့်အတား ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အရီဇိုးနားပြည်နယ် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန် မက်ကိန်း။ (Photo: AFP)
သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလက မြန်မာနိုင်ငံကို သွားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရော အစိုးရ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ရတော့မှာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းတလှမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ MOGE နဲ့ အမေရိကန် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်တယ်လို့ မစ္စတာ မက်ကိန်းက ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းဟာ အစိုးရပိုင်ဖြစ်ပြီး သူတို့ဌာနဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ထောင်ချီတဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေတွေ ရနေသလို ဘယ်လောက်ရနေတယ်၊ အဲဒီငွေတွေကို ဘယ်လို သုံးစွဲနေတယ်ဆိုတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသေးဘူးလို့ မက်ကိန်းနဲ့ လီဘာမန်းတို့က ထောက်ပြကြပါတယ်။
အမေရိကန် လုပ်ငန်းရှင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ ရပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း အိုဘားမားအစိုးရက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေသစ်အရ မြန်မာ အစိုးရပိုင် မြန်မာ့ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းနဲ့ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရမှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနကို ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အကြောင်းကြား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းအတွက် ဒေသ ခံတွေ လျော်ကြေးရမယ်
အမေရိကန် လျှော့ချပေးမှု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ကြိုဆို
မြန်မာပြည်အပေါ် ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရပ်တန့်ထားဖို့ အမေရိကန်အမတ် ပြောဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုဖို့ စောင့်စားနေကြောင်း ဂျွန် မက်ကိန်း ပြော
အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် မြန်မာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေ့ဆုံ
It is too early for you to invest in Myanmar.The Democracy is not yet set-up in Myanmar.Are you really Myanmar to beaDemocratic Country or are you trying to take Economical/political/Military advantage same as Middle East and Egypt.
Jul 13, 2012 09:08 PM
That's why your country people are getting poor and having unemployment problem. That's not the root cause.Business is business, trying to protect our MM people should try to find the root cause n help with other way. Especially if US will joint with their Business, that's would be the best for US and also can watch closely to us. Think from different direction, not just from one side.
Jul 13, 2012 01:45 PM